को Blockchain-कंसोर्टियम R3 वकील लागि शैक्षिक केन्द्र सिर्जना. - Blockchain समाचार
को Blockchain-कंसोर्टियम R3 वकील लागि शैक्षिक केन्द्र सिर्जना.
हिजो, फेब्रुअरी मा 20, को R3 Blockchain कंसोर्टियम, यस्ता UBS रूपमा वित्तीय क्षेत्र दिग्गज समावेश, जर्मन बैंक, बार्कलेज र बैंक अमेरिका, व्यवस्थाको प्रशिक्षण केन्द्र सिर्जना घोषणा (LCoE).
अग्रसर रूपमा, व्यवस्था कम्पनीहरु मासिक सभा पकड हुनेछ, विद्यमान विषयगत सामाग्री अध्ययन र आफ्नो अनुसन्धान कार्य रचना, वास्तविक blockchain परियोजनाहरुमा सहित भवन.
त्यसैले, को Maison परियोजनामा ​​गत हप्ता केन्द्र सदस्यहरू प्रदान गरेका थिए पहुँच, जो स्कटल्याण्ड को शाही बैंक को सहभागिता साथ विकास र वित्तीय रिपोर्टिङ लागि वितरण रजिस्ट्री गर्दछ भइरहेको छ. अधिक दस ठूलो व्यवस्था कम्पनीहरु पहिले नै केन्द्र सदस्यहरू भएका छन्, बेकर McKenzie सहित, Crowell & Moring, क्लिफर्ड सम्भावना, Ashurst र पर्किन्स Coie.
जेसन Rozowski, R3 मा वरिष्ठ परामर्शदाता र नयाँ केन्द्र को टाउको, भने:
“हामी कि वातावरण सहभागीहरू सुनिश्चित गर्न अन्तिम कदम लिनु आवश्यक, हामीलाई सहित, प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सहज महसुस. विचार गर्ने blockchain-ठाउँ मा के भइ रहेको छ मानिसहरूलाई व्याख्या गर्न छ, के हामी काम गर्दै के परियोजनाहरू र लाभ हामी हेर्न. “
अघिल्लो पोस्ट:एक नयाँ Cryptocurrency बस बाहिर आयो, त्यो रूपमा Bitcoin रूपमा बोल्ड छ
अर्को पोस्ट:बजार विश्लेषण रिपोर्ट 21.02.2018
मार्च 15, 2018 मा 9:50 AM
अप्रिल 11, 2018 मा 8:05 AM
Jacque Sessom भन्छन्:
सक्छ 21, 2018 मा 6:08 AM